MYANMAR BLOGS READER
1 Killed, 40 Hurt When Apparent Tornado Hits Germany - Violent storms buffeting western Germany on Friday killed at least one man and injured about 40 people, 10 of them seriously, when an apparent tornado rake...
၂၀၂၂ ေမလ(၂၁)ရက္ စေနေန႔ မနက္ခင္း VOA - ထိပ္တန္းေရာက္သတင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈျပႆနာ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း တင္ျပ ၊ သမၼတဘိုင္ဒင္ အာရွေရာက္ေနခ်ိန္ ေတာင္တ႐ု...
ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ်အားကစားနည်းမှ မြန်မာရွှေတံဆိပ် ၁ ခုထပ်ရ - ဗီယက်နမ် ဆီးဂိမ်းစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ မေလ ၂၀ ရက်က ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ မြန်မာအားကစားအဖွဲ့က ရွှေတံဆိပ်တစ်ခု၊ ငွေတံဆိပ်သုံးခုနဲ့ ကြေးတံဆိပ်ခြောက...
Eight Magwe Civilians Killed in Myanmar Junta Raids - Regime forces are stepping up attacks on the resistance strong-hold of Magwe Region. The post Eight Magwe Civilians Killed in Myanmar Junta Raids appeare...
ရေဦးနှင့် ဒီပဲယင်းအစပ်တွင် စစ်​ကောင်စီတပ်က​သေဆုံးစစ်သားအ​လောင်းများကိုမီးရှို့ပြီးထားခဲ့ - (စစ်​ကောင်စီတပ်က ​သေဆုံးစစ်သားအ​​လောင်းမီးရှို့ထားခဲ့မှု ။ ။ဓါတ်ပုံ-CJ)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရေဦးမြို့နယ်နှင့်ဒီပဲယင်းနယ်အစပ်တွင် စစ်​ကောင်စီတပ်က သေဆုံး...
Celebrity နေ့စဉ်သတင်း၊ မေလ (၂၀) ရက် -
တစ်နေ့ (၁၀) သိန်းကျော်ဖိုး ရောင်းရတဲ့ ဒဂုံ (၁) ထမင်းကြော် - “ဒဂုံ (၁) ကျောင်း မုန့်စျေးတန်းမှာ ကလေးတွေ က ထမင်းကြော် အရမ်း ကြိုက်တော့ အခုချိန်ထိ ထမင်းကြော်ပဲ ရောင်းဖြစ်သွားတယ်။ တစ်နေ့ကို (၁၅) သိန်းဖိုး လောက် ရောင...
''အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ပြင်ပသွားချိန် နှာခေါင်းစည်းများတပ်ထားဖို့ မလိုတော့ကြောင်း သမ္မတပြောကြား'' -
မျဉ်းပြိုင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာ အပိုင်း (၇) စာရေးသူ-နတ်သမီး -
(SCP-3033) အဆိပ်ပြင်းလက်နက်သဖွယ် ဖန်တီးခြင်းခံရတဲ့ လူသတ်သမားမိန်းမပျိုများ... 😱😱😱 -
Burmese Cele News
မၾကာခင္မွာရံုတင္မယ့္ဇာတ္ကားကို လာၾကည့္ဖို႔ေျပာလာတဲ့ ေအာင္ရဲလင္း (Burmese Cele News) -
Tun Tun Vlogs
Burmese Beef Curry & Rice noodle salad | အမဲသားနှပ် | အမဲသားမုန်.တီသုပ် -
အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေထူးနဲ့ရွှေမှုန်ရတီ... -
CV လှအောင်ရေးနည်း။​ -
Olive Myanmar Vlog
30 days English Learning Challenge for pure beginners!! -
KBZ allows cash withdrawal without limitation; but only for cash deposit - KBZ bank announced that its customers can now withdraw cash from their personal bank without any withdrawal amount limitation, but it only applies to the c...
ခရမ္းေရာင္ေလးနဲ႔ မို႔ေမာက္လ်ံထြက္ေနတဲ့ ေရႊရင္ႏွစ္မႊာကို ျမင္သာေနတဲ့ ျဖဴသိဂၤေက်ာ္ ရဲ႕ ပံုရိပ္ေလး မ်ား - ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးေရ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ တက္သစ္ဆ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖဴသိဂၤေက်ာ္ ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ေမာ္ဒယ္လ္ေလာက ကိုဝင္ေရာ...
Rich Life Insider Myanmar Stocks & Real Estate
💰စတော့ ထိုးတက်! စတော့ 10 ခု! တစ်နာရီအတွင်း $893 အမြတ်! စိုးရိမ်စရာ ၃ ခု! -
Plaintiff testifies against Daw Aung Suu Kyi for taking $500K bribe from tycoon Maung Weik - 2022-05-11 12:45:15 U Ye Htet from the Anti-Corruption Commission testified asaplaintiff in court against Daw Aung San Suu Kyi for two counts of corrupt...
Aung San Suu Kyi on trial in fresh bribery case against ousted Myanmar leader - Supporters say cases against the deposed leader are an attempt to discredit her and legitimise the military’s seizure of power Ousted Myanmar leader Aung...
Singing Reactions on Omegle ကိုယ်မသိတဲ့သူစိမ်းတွေကိုသီချင်းဆိုပြသောအခါ Htun Naung Sint | Ep 10 -
CRPH သို့မဟုတ် အစရဲ့အစ - *Lwin Ko Latt* Feubruuat45Spry0 5n a19tt 3:5375u 3AmM · CRPH သို့မဟုတ် အစရဲ့အစ ---------------------------- စာတစ်စောင်က CRPH ကိုမွေးဖွား ပေးလိုက်တာပါ...
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို အဂတိမှု ၁ မှု ထပ်တိုး အမှုဖွင့် - ပြည်သူတွေအတွက် သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးဝယ်ယူ ငှားရမ်းအသုံးပြုခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နိုင...
M Cele TV
မွေးနေ့မှာ ကုသိုလ်တွေ တစ်ဝကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ မေမြတ်နိုး -
ကြည့်နေရင်ဂွင်းပါထုလိုက်ရမယ် စော်ကြီးကိတ်ချက် -
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုးများ အကြောင်း -
မျိုးရိုးဗီဇ ၊ ဖြတ်လမ်းလိုက်မှု ၊ လိုချက်တက်မှုတွေကြောင့် ဧရာမမာဆယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူများ -
R2P သတင်းကောင်းကြီး ဒေါက်တာ ဆာဆာ ပြောပြီး -
8 Powerful ways to getaGuy to Ask You Out - Right now, you’re drawn to this hunk at school or college, right? Isn’t it true that you’d like him to ask you out foradate? In this post, I’ll give yo...
#weeklyvlogs "A Day in Isolation" -
ဆူးလေစကွဲမှာ လူထုကိုအားပေး ဝန်းရံခဲ့တဲ့ အဆိုတော် လင်းနစ် -
ေမြးသမိခင္ေက်းဇူးရွင္ဆိုတဲ့အတိုင္း ၁၁၃ ႏွစ္႐ြယ္အေမကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ၈၅ ႏွစ္အ႐ြယ္အဘိုးအို - ေမြးသမိခင္ေက်းဇူးရွင္ဆိုတဲ့အတိုင္း ၁၁၃ ႏွစ္႐ြယ္အေမကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ၈၅ ႏွစ္အ႐ြယ္အဘိုးအို ၁၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္အေမအိုကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့သားရဲ႕အ႐ြယ္က...
အသက် (၅၉) နှစ်အထက် အလယ်တန်းပြ ဆရာ ဆရာမများ လစာတိုးပါပြီ - အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုးမူအသစ်အရ အသက်(၅၉)နှစ်နှင့်အထက် အသက်အရွယ်ရှိသည့် အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမများကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်ကစတင်ကာ အထက်တန်းပြလစာ တိုးမြှင့်ပေးလိ...
ထရန့်ကိုင်ထားတဲ့ ဝှက်ဖဲတချပ်ကို ကြောက်လန့်နေရတဲ့ ဘိုင်ဒင်တို့အဖွဲ့ -
Tha Mu Daya - Watch The post Tha Mu Daya appeared first on Shwe Dream.
ယေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ TNLA၊ AA ၊ MNDAA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕တို႔မွ ေနာင္ခ်ဳိ မူးယစ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးၿပီး အေဆာက္အဦအတြင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဖမ္းေခၚသြားသည့္ ဗြီဒီယိုဖိုင္ ထြက္ေပၚ - ယေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ TNLA၊ AA ၊ MNDAA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕တို႔မွ ေနာင္ခ်ဳိ မူးယစ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးၿပီး အေဆာက္အဦအ...
Naw Htike, Traveler From Myanmar
10 Most Interesting Construction Inventions - Have you ever tried to closeasale, only to hear the disappointing news that the prospect chose to go elsewhere? You know your product and services are ...
Nanmalgyi - News & Entertainment
Red-hot Chilean Pereira storms into PGA Championship contention -
21 August 2021 - Volume VIII, Number 124, Saturday, 21 August 2021